Sida loo Bannee Recycle Bin ee Windows s
Marka la isticmaalayo Windows in ay tirtirto ama waxyaabaha files in computer si aad u abuuro meel dheeraad ah oo ku wadid aad u adag, files ee aan si dhab ah tirtiray. Files Your ku meel gaar ah ku keydsan yihiin oo ay bin recycle ah, laakiin haddii aad u tagto oo dheeraad ah si ay u faaruqiso bin recycle ah, files ku jireyso ka jira Recycle Bin. Sidoo kale bin recycle ku isticmaalaan xaddi gaar ah oo ay meel ku kaydiso content tirtiray. Marka meel la joogo waxaa xadiday, files jir ah ayaa la tirtiro si loo abuuro qolka si ay kuwo cusub. Taasi waa sababta waxaa laga yaabaa in aad ka heli aad file waayay recycle xitaa haddii aad marna waxaa loo madhiyo.
Midig u guji aad recycle bin
Dooro bin recycle ku saabsan desktop daaqadaha iyo xaq guji ku yaal. Your screen muujin doonaa sanduuq wada hadal sidan oo kale ah
Dooro recycle bin madhan
Laga soo box wadahadal dhinaca gacanta midigta ee Recycle Bin, recycle bin dooran madhan.
Bannee Recycle Bin
Laga soo bilaabo waxyaabaha kala duwan ee delete sanduuqa wadahadal , xaqiijin adigoo gujinaya HAA . Waxaad arki doontaa sanduuqa wadahadalka horumarka muujinaya hannaanka tirtirka socda ah. Waxyaabaha aad recycle bin baabi'i doonaa mid mid. Tani waxay qaadan doontaa oo keliya daqiiqado yar la siiyey tirada alaabta aad recycle bin.
Ogsoonow in aad weli dib u soo ceshano karaan faylasha aad ka dib markii uu bin recycle ayaa dhameystirtay iyaga la tirtiro si joogto ah.
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka soo ururiyeen oo Recycle Bin
Si aad u soo ceshano dhammaan faylasha, kaas oo aad si joogto ah la tirtiro ka bin recycle ah, aad u baahan tahay wax ku ool ah software kabashada file. Wondershare Data Recovery waa mid ka mid ah qalabka soo kabashada xogta ugu wanaagsan waan ogahay. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad soo kabanayo faylasha qaar kale oo hore formatted ama lumay xisaabiyaa ay sabab u tahay nidaam musuqmaasuq ah iyo qalabka kale saari karo sida kamaradaha digital, kaararka xusuusta iyo cajaladaha flash.
Haddii aad bilaabayso ama bilow Wizard Mode Recovery waa ugu fiican ee aad qalab inuu ka soo kabsado files qiimaha leh. Marka la isticmaalayo hab saaxir, kaliya lagu weydiiyo in aad su'aalo fudud, ka dibna computer ka qabanaysa soo baxay inteeda kale.
Wixii halyeeyada, Standard Mode Recovery loogu talagalay idin ​​siiyey khubaro farsamo aad. Iyadoo hab this, waxaad ka heli doontaa khibrad sare oo dheeraad ah si aad xirfadaha.
Download aad nuqul ka mid ah soo kabashada Wondershare Data daaqado maanta, rakibi iyo waxa maamula on your computer. U ogolow software xirfad loogu talagalay in la abuuro xal aad u. Waxa ka muhiimsan, HA gashato this on disk meesha faylasha iyo xogta halkaas oo aad ku waayi kartaa.
Data Recovery Isticmaalka Wizard Mode
Dooro saaxir kabashada Mode
Si guul rakibidda ka dib hab Wizard, isla markiiba aad loo ogol yahay in ay isticmaalaan barnaamijka. Iyadoo hab this, kaliya aad u baahan yahay in ay ka jawaab labada su'aalood oo muhiim ah oo ka dibna riix Next in ay oggolaadaan in barnaamijka si ay u fuliyaan inta kale ee hawlaha.
Dooro nooca file in la soo kabsaday
Tani waa su'aasha ugu horeysa ee aad. Halkan, waxaa loo baahan yahay in aad dooratid file oo aad rabto in aad barnaamijka dib u soo ceshano. Waxa kale oo aad ikhtiyaar u doorashada All files, haddii waxyaabaha aad doonaysaan inaad la soo kabsaday waa in files kala duwan. Noocyada File noqon kartaa audio, email, video, dokumenti iyo sawiro.
Dooro meesha aad ka badiyay faylasha aad
Su'aal aad u labaad waa in la ogaado meesha aad u badiyay faylasha aad. Haddii faylasha aad hore ugu jiray bin recycle ka hor inta aysan la waayay, dooro Recycle Bin. Qoruhu kale waxay noqon kartaa desktop, waraaqaha aan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan hubin halka faylasha aad lumeen, dooran computer.
Guji Start inuu ka soo kabsado aad files lumay
Riix Start si ay u bilaabaan dib u soo kabashada aad files lumay. Waxaad arki doontaa in uu jiro soo kabashada file ceeriin iyo scan Deep doorasho bandhigay aad screen PC. Doorashada Deep scan amri doono barnaamijka dib u soo ceshano whish files lumeen oo sabab u ah formatting. Wixii soo kabashada file ceeriin ah waxaad awoodi doontaa inaad hesho files lumay ay sabab u tahay sababo kala duwan. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo aad dooran kartaa inaad iska indha haddii aad doonayso in ay dib u soo ceshano files tirtiray dhawaan oo aad hubto in nooc ka mid ah habka aad loo isticmaalo in lagu tirtirto.
Ka soo kabashada aad files lumay
Haddii aad dooratay oo dhan files ee hore ee tallaabo 2, faylasha baxey ayaa la soo bandhigi doonaa qaybaha file sida archives, saldhig xog, sawiro, email, video, audio iyo wixii la mid ah. Qaybaha file Kuwan waxaa ka soo kabsaday ka dib markii previewing. Wixii PPT, rar, Excel, PDF iyo sawiro ay ka mid yihiin oo aan ku xaddidnayn JPG, PNG iyo TIF yihiin previewed hanaanka soo kabashada ka hor.
Waxaad ka hubin kartaa files soo kabsaday, halka habka dib u soo kabashada waa mid joogto ah.
Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Recycle Qolashada
Haamaha Recycle yihiin sida wax kale ururinta qashinka haamaha aad ka xusuusan karto. Si kastaba ha ahaatee noocan oo kale ah bin waa mid gaar ah maadaama ay tahay dhijital muuqaal iyo wax kasta oo files dibabaxayaal la soo celin karin. Mararka qaarkood, marka bin recycle waxaa si qalad ah loo madhiyo, waxyaabaha la soo kabsaday karaa iyadoo la isticmaalayo qalab ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada xogta. Sidoo kale sabab u tahay meel bannaan oo kooban bin recycle ah, files dibabaxayaal waa khasaare markuu faylasha lagu daray. Marna ha argagixin markii files yihiin laga badiyay, waxaa iyaga weli lagu soo kabsaday karo.
Marka Recycle Bin kama muuqan desktop, waxaa loola jeedaa in icon waa la qariyey. Way fududahay in la soo celin dib ugu desktop ah dhib la'aan. Taasu waa ma u baahan tahay si aad u khabiir computer si aad recycle bin soo laabto. Raac talaabooyinka si sax ah iyo hubi bin icon recycle tusi doonaa shaashadda.
Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa bin icon recycle ah, haddii aadan jeclaan image hadda. Bedelaya recycle bin icon maanta.
> Resource > Windows > Sida loo Bannee Recycle Bin ee Windows